စျေးကွက်အတိုင်ပင်ခံ (entry-level) - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့် Beat အသုံးပြုပုံ NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » ဂျော့ဘ် » စျေးကွက်အတိုင်ပင်ခံ (entry-level)
ယောဘသည်ဖွင့်ပွဲ: စျေးကွက်အတိုင်ပင်ခံ (entry-level)
ရာထူး: စျေးကွက်အတိုင်ပင်ခံ (entry-level)
Location: Quincy IL US
အသံလွှင့်ခြင်းနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ၌သင်တို့၏အမှတ်အသားလုပ်ပါ။ Sinclair အသံလွှင့် Group နှင့် Sinclair ဒစ်ဂျစ်တယ် Solutions Sinclair ဆက်သွယ်ရေးအင်အားကြီးအောင်မှဆက်ကပ်အပ်နှံထားများမှာ! ကျနော်တို့တိုင်းပြည်အတွင်းအကြီးဆုံးနှင့်အများဆုံးပိုမိုစုံလင်ရုပ်မြင်သံကြားအသံလွှင့်ကုမ္ပဏီဖြစ်ကြသည်။ Sinclair ပိုင်ဆိုင်လုပ်ကိုင်, ပရိုဂရမ်သို့မဟုတ်မည်သူမဆိုထက်ပိုရုပ်မြင်သံကြားဘူတာမှန်ဆောင်မှုပေးပါသည်အပေါင်းတို့နှင့်အဓိကကွန်ရက်များနှင့်အတူဆက်နွယ်ပေါင်းစည်းမှုရှိပါတယ်။ Sinclair ဒစ်ဂျစ်တယ်အုပ်စုတစ်စုလုံးကိုတိုင်းပြည်အပေါ်ပရိသတ်တွေဖို့ဝက်ဘ်, မိုဘိုင်းနှင့် over-the-ထိပ်တန်းရုပ်သံလွှင့်ဖို့ကိုအများဆုံးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အကြောင်းအရာဆောင်ခဲ့အပေါ်အာရုံစူးစိုက်နေပါသည်! ကျွန်ုပ်တို့၏အောင်မြင်မှုရူပါရုံကိုယုံကြည်နှင့်ငါတို့န်ထမ်းဘို့ကြီးစွာသောအနာဂတ်ရေးအတွက်ဆက်ကပ်အပ်နှံထားသူထူးခြားသောန်ထမ်းများနှင့်တစ်ဦးစံပြစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့၏ရလဒ်ဖြစ်ပါသည်။ သင်တစ်ဦးစက်မှုလုပ်ငန်းဝါရင့်သို့မဟုတ်တစ်ရုံအထဲကစတင်ဖွစျစေ, သငျသညျ Sinclair မှာတှေ့နိုငျပါသညျ! ကျနော်တို့အသံလွှင့်လောကီသားတို့သည်အတိုးတက်နေကြသည်နှင့်အကြှနျုပျတို့သညျကြှနျတျောတို့ကအနိုင်ဂိုးအဖွဲ့ join ချင်တယ်!
Quincy, IL အတွက် KHQA-TV ကို, entry-level Marketing ကိုအတိုင်ပင်ခံများအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ client များနှင့်အတူချိတ်ဆက်သူတို့ကိုထိရောက်သောတီဗီနဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်ကြော်ငြာမှတဆင့်မိမိတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်ကူညီနိုင်သူတစ်စုံတစ်ဦးကိုရှာကြ၏။ အဆိုပါစံပြကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ဦးစိတ်အားထက်သန်ခြင်းနှင့်အသည်းအသန်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်မှုဝင်စားမည်, တစ်ဦး tenacious သေးစာနာသဘောထားနှင့်အောင်မြင်နေတဲ့ drive ကိုရှိသည်!
ကျနော်တို့လက်ရှိမီဒီယာရောင်းအားအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်စိတ်ဝင်စား entry- အဆင့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရှာကြ၏။ အလုပ်အကိုင် Baltimore, MD အတွက်ပြင်းထန်သောရောင်းအားလေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်တွင်ပါဝင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ လေ့ကျင့်ရေးပြီးနောက်တာဝန်ဝတ္တရားများပါဝင်သည်ပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ကန့်သတ်မထား:
ဘူတာရုံများအတွက်ဝင်ငွေထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် In-လူတစ်ဦးနဲ့အီးမေးလ်ဆက်သွယ်ရေး, တယ်လီဖုန်းအပါအဝင်ထိရောက်သောမြှူဆွယ်တောင်းခံ, ပရိုမိုးရှင်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများမှတဆင့်လစဉ်ရည်မှန်းချက်များတွေ့ဆုံတာဝန်ရှိသည်
client ကိုအဆိုပြုချက်များနှင့်အခြား client ကိုမှတ်တမ်းတင်ဖို့အထောက်အကူ
အားလုံးကြော်ငြာစာရွက်စာတမ်းများစာရွက်စာတမ်းအားလုံး client ကိုအဆက်အသွယ်နှင့် file
အွန်လိုင်း, တီဗီ, မိုဘိုင်းထည့်သွင်းကြော်ငြာမဟာဗျူဟာ Create နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ် Billboard နတ်ကတော်
တိုတိုနှင့်ရေရှည် client ကိုမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအစီအစဉ်ကိုဖန်တီးပါ
ပြင်ဆင်. , ညှိနှိုင်းရန်နှင့်အကောင်အထည်ဖေါ် client ကိုမီဒီယာ လုပ်. ဝယ်ယူခြင်းများ
ဒါဟာမီဒီယာ လုပ်. ဝယ်ယူခြင်းများမှပြောပြတယ်အဖြစ်လူဦးရေဒေတာကိုနားလည်
က MS Word, Excel, နဲ့ PowerPoint အတွက်တတ်ကျွမ်း
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ တီဗီနည်းပညာ က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2017-04-29
နောက်တစ်ခု: (In-သင်တန်း) facility အင်ဂျင်နီယာချုပ် (သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အင်ဂျင်နီယာချုပ် 2)